अमरपथ दीपावली महोत्सवमा दर्शकलाई निशुल्क प्रवेश ! « Himal Post | Online News Revolution
अमरपथ दीपावली महोत्सवमा दर्शकलाई निशुल्क प्रवेश !
प्रकाशित मिति : २०७४, ३१ आश्विन १०:३७
३१ असोज, बुटवल ।
हिन्दुहरूको दोस्रो ठुलो चार्ड दीपावलीकोे अवसरमा बुटवलको अमरपथमा महोत्सव हुने भएको छ । अमरपथ टोल विकास समितिले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि ३ दिने दाशौं अमरपथ दीपावली महोत्सव २०७४ गर्न लागेको हो । महोत्सव कार्तिक १ गतेदेखि ३ गते सम्म सञ्चालन हुनेछ । समितिले सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महोत्सव गर्ने जानकारी गराएको हो । महोत्सवभरि अमरपथमा रहेका ५५ वटा पसलहरुमा अहिले दिँदै आएको छुटमा ५ देखि १५ प्रतिशत सम्म थप छुटको ब्याबस्था गरिने बताइएको छ ।
महोत्सव अवधिभर अमरपथलाई दुलही जस्तै सिंगारिनेछ भने हरेक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथै अंकल अन्टि सोको मनोरञ्जन समेत प्रदान गरिने अमरपथ टोल विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी गराए । यसपालि अमरपथ सजावटका लागि विगतमा भन्दा फरक खाले झिलिमिली बत्तीको प्रयोग हुने बताइएको छ । महोत्सवमा सम्पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमको जिम्मा लियो क्लब अफ बुटवल खस्यौली युथले लिएको छ । विगतका वर्षहरूमा हाउजी बिङ्गो तम्बोलाले सांस्कृतिक कार्यक्रमको खर्च ब्याबस्थापन गर्न सहज भए पनि यसपालि तम्बोला सञ्चालन अनुमति दिन आनाकानी गरेकाले ब्याबसायिहरुलाई ब्यायभार थपिने देखिएको छ । यद्धपी तम्बोला संचालनकालागि पहल भने जारी रहेको उनीहरूको भनाई छ ।
महोत्सव सञ्चालनका लागि झन्डै ५ लाख खर्च लाग्ने अनुमान आयोजकले गरेका छन् । व्यावसायिक प्रवर्धन भन्दा पनि संस्कृति जर्गेनालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम गर्न लागिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी गराए । महोत्सवमा दर्शकहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको ब्याबस्था मिलाईएको छ । साथै अमरपथमा रहेका ५५ वटा पसलहरुले असोज ५ गतेदेखि ग्राहकहरुलाई भाग्यशाली कुप्पन प्रदान गरिएको पनि बताइएके छ । आगामी कार्तिक १२ गतेसम्म कुप्पन बाडिनेछ । जसमा प्रथम पुरस्कार फ्रिज एक जनालाई, दोस्रो पुस्कार राईस कुकर १० जनालाई र तेस्रो पुरस्कार आईरन १० जनालाई प्रदान गरिनेछ ।
यसैबिच ब्याबसायिहरुले सरकारको फितलो नीतिका कारण ब्याबसाय नै धरापमा पर्दै गएको दुखेसो पोखेका छन् । डिपिआर पद्धति, खुल्ला सिमाना र चोरी पैठारीका कारण ब्याबसाय सङ्कटमा परेको उनीहरूको भनाई छ । टोल विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षता, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्बाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्वल कसजुको प्रमुख आथित्यता र टोल बिकस समितिका सचिव गोकुल बिकको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा समितिका पूर्व अध्यक्ष केशव टण्डन, लियो क्लब अफ बुटवल खस्यौली युथका अध्यक्ष मोहन न्यौपाने लगायतले बोलका थिए ।